+86 57 574876262877575
ब्रेक र क्लच सिलिन्डर
म्यानुअल क्लच कहिले परिवर्तन हुन्छ? हामीले यी तीन घटनाहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ
पोष्ट समय: जनवरी १ 18-२२१
म्यानुअल ट्रान्समिशनको क्लच प्लेट उपभोग्य वस्तुहरूको हो। कारको प्रयोगको साथ, क्लच प्लेटले थोरै लगाउँदछ। जब पोशाक निश्चित डिग्रीमा पुग्छ, यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक पर्दछ। हामी कसरी जान्दछौं कि क्लच प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्नेछ? पछिल्लो अनुभवका अनुसार, मलाई लाग्छ फि ...थप पढ्नुहोस् »
फ्ल्यास बिक्री No MOQ को साथ उपलब्ध छ!
पोष्ट समय: अगस्ट २१-२०२०
यो वर्ष कोरोना भाइरसको कारण हामी सबैका लागि अत्यन्त गाह्रो भएको छ। हामी आशा गर्छौं कि हामी बाँच्न र सफल हुन सँगै काम गर्न सक्दछौं। हामीले तपाईंको लागि चीन र दुबईको गोदामहरूमा प्रशस्त मात्रामा स्टक तयार गरेका छौं। यदि तपाईं अधिक वस्तुहरूको लागि मूल्य जाँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क: +86 18 1888758080 ...थप पढ्नुहोस् »
संयुक्त शिपमेंटका लागि एक स्टप सेवा
पोष्ट समय: जुन 30०-२०२०
१ १ टुक्रा MOQ, २ hours घण्टा डेलिभरी। २. दुबई र गुआंगझौमा प्रत्यक्ष बिक्री स्टोर 3.. ठूलो स्टक उपलब्धता 7.000०००+ भन्दा बढी फरक कोडहरूको साथ पूर्ण गम्भीर उत्पादन 5.. १० उत्पादन भन्दा बढी बर्षको साथ manufacturers निर्माताहरूको एकीकरणथप पढ्नुहोस् »
ठेगाना: कोठा १ 190 ०१, एउटा संस्कृति प्लाजा, नम्बर १349Li Liyuan नर्थ रोड, हाइशु, जिल्ला, नि N्गो, झेजियांग, चीन
टेलि: + 57 57 574448762 87757575
फ्याक्स: +86 574574 62 8762878770०